Vaovao - Inona avy ireo tombony azo amin'ny fampiasana fitaovana samihafa ho an'ny milina lehibe
Inona avy ireo tombony azo amin'ny fampiasana fitaovana samihafa ho an'ny milina lehibe
Mba hahafeno ny fepetra ara-teknikan'ny mpanjifany mandritra ny fiasan'ny milina lehibe, ny workpiece dia tokony hapetraka amina toerana tsara amin'ny toeran'ny milina mandritra ny fampiasana. Mba hisorohana ny workpiece mandritra ny fizotran'ny milina. Rehefa voan'ny hery ivelany ny famindran-toerana toy ny hery fanapahana sy ny hery misintona, dia tokony hampiasa clamp manokana hangeja ilay sangan'asa hitazonana ny toerany raikitra tsy miova. Inona avy ireo tombony azo amin'ny fampiasana fitaovana samihafa ho an'ny milina lehibe?
Ny tombony azo amin'ny fampiasana Q235A (vy vy) ho an'ny milina lehibe
Ny tombony lehibe amin'ny fiasan'ny milina lehibe dia manana plastika avo, henjana ary fahombiazan'ny welding amin'ny ambaratonga iray. Ny vokatra iray manontolo dia misy fampisehoana stamping sasany ary fampisehoana miondrika mangatsiaka. Ampiasaina indrindra amin'ny fangatahana izany rehefa ampiasaina. Amin'ny faritra mekanika ambaratonga ambany sy faritra ampiorina toy ny kofehy, tsorakazo mampitohy, paingotra, vatan-kazo, visy, voanjo, fononteny, toby, sns.
Tombony amin'ny fampiasana 40Cr ho an'ny milina lehibe
Ny milina lehibe dia manana fananana mekanika feno, fihenan'ny fiakaran'ny maripana, fahatsapana ambany ary fahamafisana tsara amin'ny lafiny iray aorian'ny famonoana sy famonoana. Ny tanjaka avo kokoa dia azo raisina rehefa ampangatsiahina amin'ny diloilo, ary ny faritra sasany mora vaky rehefa ampangatsiahina amin'ny rano. Aorian'ny fifehezana na famonoana ary fanamainana, tsara ny fahaizan'ny milina, saingy tsy tsara ny fangejana ary mora mipoitra ny triatra.
Rehefa ampiasaina ny masinina, dia ampiasaina indrindra izy io ho an'ireo faritra mekanika haingam-pandeha amin'ny fizotry ny famokarana aorian'ny famonoana sy ny fanalefahana, toy ny fitaovan'ny fitaovan'ny milina, ny zorony, ny kankana, sns. ampiasaina amin'ny fanamboarana kojakoja misy fahasamihafana avo sy fanoherana, toy ny kitapom-batsy, shafts, spindles, crankshafts, spindles, tanan-tànana, pin, famaohana, sns
Aorian'ny famonoana sy fametahana amin'ny maripana antonony dia ampiasaina izy io hanamboarana kojakoja mavesatra haingam-pandeha mavesatra, toy ny rotors pump pump, slider, gears, spindles, sns. manamboatra kojakoja mavesatra, misy fiantraikany ambany, tsy mahazaka akanjo, toy ny kankana, spindles ary shaft. Ao amin'ny tranokala carbonitriding, hamboarina ireo faritra misy refy lehibe kokoa sy hamafin'ny fiakaran'ny maripana ambany kokoa, toy ny tohatra, paingotra sns.
Ny tombony amin'ny fampiasana 45 # ho an'ny milina lehibe
45 # dia vy vita amin'ny karbaona kalitao avo lenta, ary izy izao no vy famonoana karbaona antonony sy voafehy be mpampiasa.
Amin'ny dingan'ny fiasa dia hanana toetra mekanika feno tsara izy io. Izy io dia ambany henjana mandritra ny fampiasana ary mora vaky mandritra ny famonoana rano. Ireo faritra vita amin'ny lasitra dia mila hafanaina alohan'ny fangejana ary ampiorina aorian'ny fametahana.
Ampiasaina indrindra amin'ny: famokarana faritra mihetsika mekanika mahery vaika, toy ny impeller, piston, shaft, giramara, racks, kankana, sns.